November 1, 2020 - Online Hartha
ကိုယ့်လက် (သို့)ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် ကောင်းဖြစ်မဖြစ် အရမ်းမှန်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်း လက္ခဏာ ကြည့်ရန်…
November 1, 2020 by Online Hartha
ကိုယ့်လက် (သို့)ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် ကောင်းဖြစ်မဖြစ် လက္ခဏာ ကြည့်ရန် အဲဒီလို နှလုးံ လမ်းကြောင်း လေးက လက်ညှိုးအောက် ကြာသာပတေး ခုံကိုသွားနေမယ် ….. အတက်ကလေး ကလည်း လက်ညှိုး နဲ့ လက်ခလယ် ကြားကို အခွလေး ဖြစ်နေမယ်ဆ်ိုရင်….. အဲဒီသူဟာ အိမ်ထောင်ရေး မှာယဉ်ကျေးမယ်…. သူ့ ကို လည်းလေးစားအောင်နေမယ်… ဘက်ညီမယ် သံယောဇဉ် ကြီးပြီး အ်ိမ်ထောင် သာယာအောင် ဖန်င်္တီးမယ်…. ကိုယ့် လက် ၊ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက် လက်ကို စစ်ကြည့် နိုင်ပါတယ်….။ ခပ်ဆင်ဆင်တွေ အများကြီး မို့မသေချာရင် ညာဖက် လက် ကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရအောင် သေချာကြည့်ပါ… ကိုယ့်ချစ်သူ လက်ဆိုရင်လဲ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်ပါ…။ Unicode … Read more
ခဈြသူ ကောငျမလေးရဲ့အခနျးကို ဝငျမိလိုကျရာ လမျးခှဲ ဖို့အထိ ဖွဈသှားရတဲ့ အဖွဈအပကျြ…
သမီးဖြစ် ​သူ ရဲ့မင်္ဂလာ ဦးညဖြတ်သန်း ပုံ ကို အမေဖြစ် သူကြားပြီး သတိလစ်သွားရတဲ့အဖြစ်… သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီးးးးး အမေဖြစ်​သူက “သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ.. ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့ လိုက်” ” ဟုတ် အမေ” နောက်ရက်ကျ သမီး ဆီကစာတစ်စောင် ဝင်လာတယ် “အမေ MAI-Yangon-Bangkok ပဲ” ဒဲ့ ။ အဲ့ဒါနဲ့အမေဖြစ်သူလည်း ဘာအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာသိရအောင် MAI ရုံးကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်.. “MAI ရန်ကုန် ကနေ ဘန်ကောက်က လေယာဉ် အကြီးစားတွေ ဖြစ်ပြီး တစ်ရက် ၅ ကြောင်း ရှိပါတယ်။ တစ်ပါတ်မှာ ၇ ရက်လုံး နားရက် … Read more
မိန်းကလေး တွေဆိုတာ သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယျာတွေကို စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကိုင်တွင်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာင်္းတစ်ယောက် တစ်နှစ်လောက်ကိုင်နိုင်တဲ့ဖုန်းကို မိန်းကလေး တစ်ယောက်က ကိုင်မယ်ဆိုရင် သုံးနှစ်လောက်ကို ကောင်းကောင်းကိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်ဝမ်က မိန်းကလေး တစ်ဦးရဲ့ အမှုအကျင့် ကတော့ မိန်းကလေး အများစုရဲ့အကျင့်နဲ့ တော်တော်ကြီးခြားနားနေပါတယ်။ သုံးနှစ်တာလောက် လက်တွဲခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ က ချစ်သူ စုံတွဲ တစ်ခုမှာ မိန်းကလေးဖြစ်သူက သူရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကို စည်းကမ်းချက်တစ်ခု ထုတ်ထားပါတယ်။ ဒါကတော့ သူမရဲ့အခန်းထဲကို သူမသိသည်ဖြစ်စေ သူမ မသိသည်ဖြစ်စေ မဝင်ရောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်လေးမှာလည်း သူ့ ချစ်သူ ရဲ့အမိန့်ကို မလွန်ဆန်ရဲပေမယ့် ဘာကြောင့်ပေးမဝင်တာလဲဆိုတာကိုတော့ တော်တော်လေး သိချင်နေမိတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေး ရဲ့အိမ်ကို လာလည်နေတုန်း ကောင်မလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူက သူ့သမီးအခန်းထဲကနေ အဝတ်အစားတစ်စုံလောက် … Read more
ကိုယျ့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြမှာ အင်ျဂါ သား၊သမီးတှေ ရှိနရေငျ ဖတျကွညျ့လိုကျပါ…
အမျိုးကောင်းသမီးလေးများ သတိထားကြပါ။ ဖြစ်သွားပြီးမှဆို တကယ်မလွယ်ပါဘူး…!
(၂၁)ကွိမျမွောကျ သိနျးတဈသောငျး ကံထူးရှငျ ထှကျပျေါလာပါပွီ…
၂၁ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင် ပခုက္ကူခိုင်ရွှေဝါထီဆိုင် ပိုင်ရှင် ဦးဇော်နိုင်မှ ရောင်းမကုန်သည့် ထီလက်ကျန်မှ သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး ဆွတ်ခူး သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဌ ၁၁၁၉၃၇(ခိုင်ရွှေဝါ) သိန်းတစ်သောင်း ယ ၅၃၉၃၅၄ သိန်းငါးထောင် ဝ ၃၇၅၆၀၁ ကဂ ၉၀၄၉၇၀သိန်း၂ဝဝဝဆု ဓ ၆၇၄၆၈၉ ဂ ၃၉၃၂၀၃ အ ၁၀၁၄၃၆ သိန်း၁ဝဝဝဆု အ ၁၃၀၈၂၁ ကခ ၅၂၂၁၅၂ ဒ ၇၁၅၀၆၆ သ ၇၅၈၅၂၂ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း၅လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည် ဇ ၅၃၄၉၆ ကင ၂၂၅၄၁ ဃ ၃၈၅၆၈ ယ ၃၁၂၂၂ ကဃ ၉၇၃၅၄ ဟ ၂၁၄၆၉ ယ ၅၆၅၂၅ ဟ ၂၁၄၆၉ ဠ … Read more
ဘုရားမဟုတျ ညာတငျကုတျ…သိဒ်ဓိဝငျ ညာတငျကုတျ ရုပျထုတှေ အကွောငျး
ဘုရားမဟုတ် ညာတင်ကုတ်…သိဒ္ဓိဝင် ညာတင်ကုတ် ရုပ်ထုတွေ အကြောင်း ဘုရားမဟုတ် ညာတင်ကုတ် ကိုင်ကြည့်လက်တစ်ဆုပ် ပညာခန်း တစ်ခန်းမြှုပ် လုပ်ကြည့်တကုတ်ကုတ် သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွား ဆိုရိုးရွိသတဲ့ ဒီအကြောင်းပြောရရင် ရာဇဝင်များတယ် တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်း ဆိုသလိုပဲ နယ်ပယ်အလိုက် ပညာအယူဆ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် တစ်ချို့ကလည်း ဆေးညာတင်ကုတ်ဆိုပြီး ရှိပြန်တယ်..ညာတင်ကုတ်ဆိုတာ ရှေးလောကီပညာရှင်တွေက ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ စီမံခဲ့တာပါ ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး ဂမ္ဘီရဆန်ဆန်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်…အဓိကအားဖြင့် အဂ္ဂိရတ်သမားတွေအတွက်လို့ ဆိုကြပြီး အတုတွေလည်း အလွန်ပေါတယ်… လိုအပ်သူတွေကတော့ ဈေးကြီးပေးဝယ်လေ့ရှိကြတယ်..သူ့ရဲ့အစွမ်းက လိုတရတယ်လို့တောင် ပြောကြတယ်..တစ်ချို့ကလည်း လိုရာပြီးတယ်လို့ ဆိုကြပြန်တယ် မြန်မာပြည်မှာ တကယ်အစွမ်းထက်တဲ့ ညာတင်ကုတ် အရေအတွက်စုစုပေါင်းကို လူတစ်ချို့က ၁၂ ခု ၁၃ ခုလောက်အထိ ရှိကြောင်း တစ်ချို့ကလည်း ၂ ခု ၃ … Read more
(၂၁) ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ သိနျးဆု ထီဖှငျ့ပှဲ ထီပေါကျစဉျတိုကျရနျ…
November 1, 2020 November 1, 2020 by Online Hartha
(၂၁) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းဆု ထီဖွင့်ပွဲ. ထီပေါက်စဉ် Up to Date သိန်း ၁၅၀၀၀. ဌ ၁၁၁၉၃၇. မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀၀. ယ ၅၃၉၃၅၄. သိန်း ၅၀၀၀. ဝ ၃၇၅၆၀၁. သိန်း ၅၀၀၀. ကဂ ၉၀၄၉၇၀. သိန်း ၂၀၀၀. ဓ ၆၇၄၆၈၉. မိုးယံ သိန်း ၂၀၀၀. ဂ ၃၉၃၂၀၃. သိန်း ၂၀၀၀. အ ၁၀၁၄၃၆. သိန်း ၁၀၀၀. အ ၁၃၀၈၂၁ သိန်း ၁၀၀၀. ကခ ၅၂၂၁၅၂. မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀. ဒ ၇၁၅၀၆၆. မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀. … Read more
(၂၁)ကွိမျမွောကျ ထီပေါကျစဉျ တိုကျရိုကျ LIVE (ရုပျသံ) ကွညျ့ရနျ..
(၂၁)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရိုက် LIVE (ရုပ်သံ) ကြည့်ရန်.. ထီတိုက်ရိုက် live ကြည့်ရန် ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်… ပြည်သူအပေါင်း စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ တစ်လမှာ တစ်ခါသာကံစမ်းခွင့်ရကြတဲ့ ထီထွက်ရှိလာပါပြီနော်… အားလုံးကံစမ်းထားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကို ဒီလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘယ်သူဆွတ်ခွတ်မလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စရာပါပဲ။ ကျန်ဆုများကိုလည်း ဘယ်သူတွေကဆွတ်ခူးမလဲ မသိသေးပေမယ့် ခုဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ ထီပေါက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အားလုံးကျန်းမာပြီး ထီပေါက်ပြီး လှူနိုင်တန်းနိုင် စားနိုင်သောက်နိုင်ကြပါစေ….။ “ထီပေါက်စေသောဂါထာ”ရွတ်ဆိုရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး တစ်ခါက စာရေးတံမဲကံအရာ(ထီကံ)၌အလွန်ကံကောင်းတတ်သော ကုဏ္ဍဓာနမထေရ်မြတ်ကဲ့သို့ ထီပေါက်တတ်သောကံအရာ၌ အသာလွန်ဆုံး အမြတ်ဆုံးဖြစ်လို၏ဟု ဆုတောင်းသစ္စာပြု ၍ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါက ထီပေါက်စေသော ကံစမ်းမဲပေါက်စေသော ကံအရာ အကျိုးပြုပေလိမ့်မည်။ ထီထိုးပြီးလျှင် ဘုရားစင်ပေါ်ကပ်လှူ ၍ ဤဂါထာကို သက်စေ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် … Read more
”လူတိုင်း ထီပေါက်ချင် ကြတယ် ဒီနည်းကို မသုံးကြလို့ မပေါက်ကြသေး တာပါ”
အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာတော်…။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာကို တင်ပေး လိုက် ပါတယ် အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ် ပါသည်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က…“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရှိစဉ်ကေ ကာဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမ စာရေး တံမဲကို အမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေ သတည်း” ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရှေးဟောင်း ပေစာ တစ်ခုထဲ မှာလည်း ဒီဂါထာရဲ့ အစွမ်းကို အထူး အစွမ်း ထက်မြက်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာကို … Read more